ऐतिहासिक सिम्रौनगढः एक चर्चा | सहारा टाइम्स
Home » Culture » ऐतिहासिक सिम्रौनगढः एक चर्चा
SAHARA TIMES Wednesday, February 10, 2016 1 No comments
मानव अतितलाई छातीमा समेटेर ऐतिहासिक धरोहरलाई सुरक्षित राखेको छ सिम्रौनगढ, जसलाई खुल्ला इतिहास, कला संस्कृतिको संग्रहालयको रुपमा लिन सकिन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको सिम्रौनगढ अहिले नेपालको राजनीतिक भूगोलमा मध्य नेपालको नारायणी अञ्चल, बारा जिल्लामा पर्दछ ।
बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट २० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सिम्रौनगढ पूर्व पश्चिम ४.५ कि मि, उत्तर दक्षिण ६.५ किलोमिटरमा फौलिएको छ । समुन्द्री सतहदेखि ३०० देखि ५०० मिटरको औसत उचाईमा रहेको यो ठाउँ करीब २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विश्व मानचित्रमा यो क्षेत्र २५.५५ पूर्व पश्चिम अक्षांश र ८५.१० उत्तरदक्षिण देशान्तरमा रहेको छ । ९ गाउँ विकास समिति र २० गाउँमा फैलिएको सिम्रौनगढको दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यको पूर्वी चम्पारण, पूर्वमा रौतहट, उत्तरमा मकवानपुर र पश्चिममा पर्सा जिल्ला पर्दछ ।
सिम्रौनगढकोे स्थापना उपनिषदकाल र पौराणिक कालमा हिन्दू संस्कृतिको केन्द्रको रुपमा प्रख्यात प्राचीन विदेह वा मिथिला क्षेत्रमा भएको हो । लामो समयको अन्तरालपछि सन् १०९७ मा कर्नाटकवंशी राजा चालुक्यका सेनापति नान्यदेवले मिथिलामाथि विजय गरी सिमलको वनलाई राजधानी बनाए । जसलाई आज सिम्रौनगढ भनिन्छ ।
सिम्रौनगढको सम्बन्ध सिमलको वनसँग रहेको तथ्य नेपालमा प्राप्त सबभन्दा पुरानो वंशावली ‘गोपालर वंशावलीले’ प्रष्ट्याएको छ । सो वंशावलीमा यस स्थललाई ‘सिमरावनगढ’ भनी उल्लेख छ, जसको अर्थ हुन्छ ‘सिमलको वनमा रहेको किल्ला’ । सिमलको वन रहेको यो क्षेत्र सिमारावनगढबाट अपभं्रश हँुदै सिम्रौनगढ भएको देखिन्छ । सन् १७३९ देखि १७५४ सम्म काठमाडौ उपत्यकामा आउने जाने गरेका इटालियन पादरी क्यासियानोले ‘सिमानागढ’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
नान्यदेवले सिम्रौनगढलाई मिथिलाको राजधानी बनाएपछि सन् १०९७ देखि सन् १३२७ सम्म कर्नाटक वंशले यहाँ अभेद शासन गरेको देखिन्छ । नान्यदेवपछि, गंगासिंहदेव, नरसिंहदेव, रामसिंह देव, शक्ति सिंह देव, भूपालसिंह देव र अन्तिम राजाको रुपमा हरिसिंह देवले शासन गरेका थिए । मिथिलाको इतिहासमा यस काललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । यस कालमा यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र कला साहित्यको विकास चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
तिरहुतका अन्तिम राजा हरिसिंहदेवको पालामा अर्थात् सन् १३२६ मा दिल्लीका बादशाह गयासुद्धिन तुकलकले सिम्रौनगढलाई ध्वस्त पारेपछि राजा र भारदारहरु उत्तरतिर लागे । राजा हरिसिंहदेव काठमाडौ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा सिन्धुलीको तीनपाटन भन्ने ठाँउमा उहाँको मृत्यु भयो । उहाँको मृत्युपछि रानी देवलदेवी (उनको माइती काठमाडौ खाल्डोमा थियो) र राजकुमार ‘जगतसिंह’ लगायत राजपरिवारका सदस्यले भक्तपुर
राजदरवारमा शरण लिए । त्यसपछि नेपाल उपत्यकाको मल्ल वंशमा कर्नाटकवंशीको प्रभाव देखिन थालियो । राजकुमार जगतसिंह नेपाल उपत्यका आउँदा सिम्रौनगढ राजपरिवारका कुलदेवी तलेजु भवानीलाई लिएर आए । पछि तलेजु भवानीको स्थापना नेपाल उपत्यकामा भयो । आज उपत्यकामा तलेजु भवानीको भव्य मन्दिर छ । यसरी काठमाडौ उपत्यका र सिम्रौनगढबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध पुरानो र प्रगाढ रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
हरिसिंहदेवको पतनपछि गयासुद्दिन तुगलकका प्रतिनिधिले मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढबाट भारतको दरभंगामा सारे । मिथिलाको नाम तुगलकावाद राखी दरभंगाबाट शासन संचालन गरियो । आजपनि दरभंगालाई तुगलकावाद पनि भन्ने गरिन्छ । पछि नियमित कर तिर्नुृ पर्ने गरी स्थानीय कामेश्वर ठाकुरलाई राज्य संचालनको जिम्मा दिइयो । ठाकुरले सन् १५२६ सम्म सत्ता संचालन गरेको देखिन्छ ।
इस्वीको १६औं शताब्दीमा पाल्पाली सेनवंशका राजा मुकुन्द सेन (प्रथम) का कान्छा छोरा लोहाङ सेनले यो क्षेत्र जितेपछि तिरहुत मकवानपुरका सेन राजाहरुकै मातहत शासित हुन पुग्यो । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको नेपाल एकीकरणको अभियानमा गोर्खाली फौजले सेन राजा दिग्वर्धन सेनलाई पराजय गरी यस क्षेत्रमा कब्जा जमायो । त्यस बखत देखि हालसम्म यो क्षेत्र नेपालमा गाभिन पुग्यो ।
सन् १२३६ मा सिम्रौनगढको भ्रमण गरेका तिब्बती विद्वान् धर्मस्वामीले गरेको वर्णन अनुसार सिम्रौनगढ एक सुरक्षित र सम्पन्न राजधानी थियो । उनका अनुसार सिम्रौनगढ बलिया, अग्ला चक्रब्युह आकार पर्खालद्वारा घेरिएको थियो । धर्मस्वामीका अनुसार त्यसबेला त्यहाँको जनसंख्या ६ लाख थियो । त्यसैगरी, इटालियन पादरी क्यासियानो (सन् १७३९ देखि सन् १७५४ सम्म) र अंग्रेज विद्वान हडसनले सन् १८३५ मा सिम्रौनगढ पुगी अध्ययन र अनुसन्धान गरेको पाईन्छ ।
तत्कालिन राजा वीरेन्द्रबाट यस क्षेत्रको अवलोकन पश्चात यहाँको पुरातात्विक अवशेषको अध्ययन अनुसन्धानका लागि भएको निर्देशन बमोजिम पुरातत्व विभाग र इटालियन सरकारको तत्वावधानमा सन् १९९१, १९९२ र १९९४ मा सिम्रौनगढको उत्खनन गरिएको थियो । उत्खननको क्रममा कर्नाट पूर्वकाल, कर्णाटकालका पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक अवशेषहरु प्राप्त भएको थियो ।
सिम्रौनगढका पुराना अवशेषहरु आज पनि यत्रतत्र पाइन्छ । यहाँ डढेको चामल, माटोका भाडा वर्तन, गर गहनाहरु पाइन्छ । यस क्षेत्रको कचोर्वा गाँउमा माकराकृतिको टुटी भएको धारो, हरिहरपुर गाविसमा रहेको ढुङ्गाको बाकस रहस्यमय रहेको छ । जति खन्दै जाँदा झन भित्र भाँसिनु यस बाकसको विशेषता छ । अत्यन्त कलात्मक रहेको यो बाकसको बाहिरी भाग मात्र देखिन्छ । बाँकी भाग जमीनमा गाडिएको छ । स्थानीय बासिले यसलाई बाकस, तिजोरी, सन्दुक भने पनि बास्तवमा यो के हो अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन् ।
बाकस भनिएको नजिकै खम्बा आकारको कालो ढुँगा छ । खम्बा सामान्य देखिए पनि १०–१५ जनाले यसलाई टसमस समेत गर्न सक्दैन । यस क्षेत्रको अमृतगंज गाविस रहेको ढुँगाको खम्बा झन रहस्यमयीे छ । स्थानीय बासीका अनुसार यस खम्बालाई बाहिर निकाल्न खोज्दा यो झन् जमीनमा भासिने गर्दछ । यो क्षेत्रमा बाढी आए पनि यो खम्बा डुब्दैन । यस प्रकार सिम्रौनगढ क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिन्छ । आज पनि यस क्षेत्रका ढुँगाका मूर्तिहरुमा दैवी शक्ति रहेको स्थानीय बासिको विश्वास छ ।
सिम्रौनगढको साँस्कृतिक सम्पदाको दोश्रो स्थानमा यहाँका मन्दिरहरुलाई लिन सकिन्छ । सिम्रौनगढको बीच भागमा स्थापना गरिएको कंकाली मन्दिर ईटद्वारा निर्माण गरिएको शिखर शैलीमा छ । मन्दिर चारैतिर चतुष्कोणाकारको भवनको बीचमा शिखर उठेर माथिसम्म चुलिएको छ । मन्दिरको चारैतिर खुल्ला गुम्बजाकारको प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ । मन्दिरभित्र १२० से.मि. को अग्लो मंच बनाइएको छ जसमाथि पूर्व्तिर फर्काएर कंकालीको मूर्ति प्रतिष्ठापित गरिएको छ ।
सम्पूर्ण भाग ईटबाट निर्मित यस मन्दिरको गाह्रो ७५ से.मि. चाक्लो छ । मन्दिरको दलिनमा विभिन्न चित्रहरु बनाइएको छ । यस मन्दिरको निर्माण मान्साराम बाबाले सन् १८१६ भन्दा अगाडि नै सानो आकारमा गरेक थिए । पछि उनका चेला रामसेवक दासले सन् १९६७ अहिलेको मन्दिर निर्माण गरेका थिए ।
मन्दिरमा रहेका कंकालीको मूर्ति कालो प्रस्तरमा कुदिएको छ । मूर्तिको गोलाकार अनुहार , ठूला आँखा, पुष्ट छातीले त्यसबेलाको विशेषतालाई दर्शाउछ । देवीको गालामा हार, कानमा गोलाकार कुण्डल, कमरमा हार जडेको च्याप्टो पेटी छ । शान्त सौम्य मुद्रामा रहेको यो मूर्तिले कलामा छुट्टै स्थान ओगटेको छ ।
यहाँ वर्षको एकचोटि चैत महिनामा रामनवमीको दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । सामान्य रुपमा भक्तजनहरुको आउने क्रम दिनहुँ नै रहन्छ । अहिले पनि यो क्षेत्रमा कंकाली माताको ठूलो महिमा छ भनिन्छ । त्यसैगरी चिताएको फल देवीले पुरा गर्छिन भने जनविश्वास छ । यस क्षेत्रमा पानी नपर्दा यहाँका महिलाहरु द्वारा कंकाली माताको पूजा आजा गरेपछि पानी पर्ने गर्दछ ।
कंकाली मन्दिर प्राङ्गणमा विभिन्न देवीदेवताका अन्य मन्दिरहरु रहेका छन् । प्राङ्गणमा रहेका मान्साराम बाबाको मन्दिर ३ मिटर उचाइर्, ५.४७ मिटरको चतुरकोणाकारमा निर्माण गरिएको छ । मन्दिरभित्र मान्साराम बाबाको समाधि स्थल छ । समाधि अगाडि एक जोर खराउ छ, जसलाई मन्साबाबाको खराउ भनी पूजा गरिन्छ । प्राङ्गनमा शिव, पार्वती, हनुमान, विष्णु, विश्वकर्माको मन्दिर रहेका छन् ।
कंकाली मन्दिरदेखि करीब डेढ माइलको पश्चिम दुरीमा रहेको छ, रानीबास जहाँ राम जानकीको मन्दिर छ । अहिलेको अमृतगंज गाविसमा अवस्थित यो मन्दिर सिम्रौनगढको बास्तुकलाको थप परिचय दिन्छ । वि.सं. १९३३ मा श्री ३ जंगबाहादुर राणाले सिम्रौनगढमा शिकार क्याम्प सकेर फर्कने क्रममा पथ्थरघट्टा भन्ने ठाउँमा उहाँको मृत्यु भएको थियो । उनकी रानी हिरण्यकुमारी सती जाने बेलामा व्यक्त गरेको इच्छा बमोजिम उनका छोरा जीतजंगले वि.स. १९३५ मा सो मन्दिरको निर्माण गरेका थिए । जुन त्यहाँको घण्टामा समेत उल्लेख छ ।
मूल मन्दिर भने तीन तहको पेटिमाथि बनेको छ जसको चारैतिर खुल्ला प्रदक्षिणा भाग छ ।
मन्दिरभित्र राम, सीता र लक्ष्मणका धातुका प्रतिमाहरु प्रतिष्ठापित छन् । अगाडि जंगबहादुर, हिरण्यकुमारी लगायत परिवारका सदस्यहरुको प्रतिमा रहेका छन् । मन्दिरको प्राङ्गण वरिपरि दुई तल्लामा चतुष्कोणाकारका धर्मशाला बनेका छन् । मन्दिर निर्माणमा त्यहाँका भग्नावशेषहरु प्रयोग भएको देखिन्छ । मर्मत सम्भारको अभावमा अहिले मन्दिर जीर्ण बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
समय–समयमा प्राप्त भएको मूर्तिले सिम्रौनगढको महत्वलाई झन् बढाइदिएको छ । यहाँका मूर्तिकलाका रचनाहरुले सिम्रौनगढको सांस्कृतिक समृद्धिलाई पुष्टि गर्दछ । यहाँको मुर्तिकलाले आर्थिक रुपले समृद्ध यो राज्यमा कला र साहित्यले भरपुर उन्नति गर्ने मौका पाएको स्पष्ट हुन्छ । मूर्तिहरु धेरै जसो हिन्दू धर्म संस्कृतिसंग सम्बन्धीत रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा हिन्दू धर्मालम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको प्रमाणित हुन्छ । अनन्त शान्ति, ऐश्वर्य, र करुणाले धपक्क बलेको, अलौकिक भाव र मुस्कानयुक्त चिल्ला काला ढुंगामा कुदिएका मूर्तिहरुले यहाँको कलाको स्वतन्त्र र मौलिक शैलीलाई प्रस्तुत गर्दछ । मूर्तिमा पाइने आवरण र आभूषणले भक्ति रस र सौन्दर्भ रसको रसास्वादन गराउन सफल छ । मूर्तिहरुमा भाव अभिव्यक्तिको जुन मार्मिकता प्रदर्शित छ त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि घीत मर्दैन ।
समग्र मिथिलाको कला संस्कृतिको परिचय दिन सफल यहाँका मूर्तिहरु संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा छन् । मुस्लमानी आक्रमणमा यहाँका अधिकांश मूर्तिहरुको अंगभंग गरी आस्तित्व समाप्त गरियो । बचेखुचेका मूर्तिहरुको पनि चोरी हुने र हराउने क्रम जारी छ । केही बर्ष अगाडि पुरातत्व विभागको सक्रियतामा कंकाली मन्दिर परिसरका मूर्तिहरुलाई मन्दिर परिसरमै घर बनाई संग्रहित गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सिम्रौनगढका केही मूर्ति र दरबारका अवशेषलाई राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा संग्रहित गरिएको छ । राष्ट्रिय संग्रहालयमा सिंहबाहिनी दुर्गा, सप्तअश्वरथ सवार सूर्यमूर्ति र ब्रम्हाको मूर्ति संरक्षित छ । सिम्रौनगढको तोरणद्धारको टुक्रा संग्रहालयको भित्री गेटमै राखिएको छ ।
यस क्षेत्रमा अनेकन पोखरी र इनारहरु रहेका छन् । जसमध्ये, इशरा, झरौखर, राजावादा, मनहर्वा, धोविनिया, नरकटी, जोकही, आमवा, हथाइया प्रमुख छन् । इशारा पोखरी कंकाली मंन्दिरको अगाडि छ । यो पोखरीको नाम राजा शिवसिंहकी रानी इशाराको नामबाट राखिएको भनाई छ । यस प्रकार, ऐतिहासिक, संस्कृतिक र पुरातान्विक महत्व बोकेको सिम्रौनगढको संरक्षण र प्रवद्र्धन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति बृहत योजनाको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि संस्कृति मन्त्रालय, गुठी संस्थान, पुरातत्व विभागजस्ता निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
कला–संस्कृतिको अकूत भण्डारको रुपमा रहेको यस क्षेत्रको उत्खनन र न्यायोचित मूल्यांकन नगरिएसम्म नेपालको कलाकृतिको इतिहासको खोजी अधुरो नै रहने देखिन्छ । बृहत गाउँ पर्यटनको सम्भवता बोकेको यस क्षेत्रको बहुमूल्य बस्तुलाई साँच्चै नै मूल्यवान बनाउने हो भने नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्ति, संघ–संस्थाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक भोजपुरी भाषा, साहित्य एवम् संस्कृतिका अभियन्ता हुन् )
Khati Dehati August 11, 2018 at 1:07 PM
मुझे कृपया इस बात को हिंदी में लिखकर भेजें मैं यहां का जितना भी खूबसूरती है इस को हाईलाइट करना चाहता हूं
रेशम चौधरीलाई नेल लगाउनेमाथि कार्यवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं असार ८ गेत । राजपा नेता तथा सांसद रेशम चौधरीलाई नेल लगाएर नै उपचार गरिएको सार्वजनिक भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाक...
प्रदीप यादवलाई छ महिनाका लागि पार्टीबाट निस्काशित
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बारे यसो भन्नुहुन्छ सिके लाल
लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम र लिखित परिक्षा योजनामा समान्य परिमार्जन
काठमाडौँ, साउन ३० गते । लोक सेवा आयोगबाट एकीकृत र संयुक्त परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन हुने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अध...
आन्दोलन हिंसात्मक रुप लिएपछि राष्ट्रपति वोलाए चार नेतालाई
काठमाडँैँ साउन ३० गते । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ४ दलका शीर्ष नेतालाई शनिबार शीतलनिवासमा भेट्ने भएका छन् । ६ प्रदेशका विषयमा व...